Shir looga hadlayo maalgashiga Soomaaliya oo Nairobi ka furmay (SAWIRRO) – idalenews.com
Waxaa maanta ka furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya shirweyne loogu magac daray Maalgashiga Soomaaliya, kasoo ay qeybgaleen wakiilo ka kala socday dalalka caalamka, ganacsato, siyaasiyiin iyo shirkaddo ganacsi.
Shirkan ayaa waxaa soo qaban qaabisay hay’adda Hanvard faraceeda Africa, ujeedada laga leeyahay ay tahay dib u dhis iyo maalgashi ballaaran oo laga sameeyo Soomaaliya, iyo gogol xaar shirkaddaha caalamka loogu sameeyo.
Shirkan ayaa waxaa furay Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Ambassador Maxamed Cali Ameeriko, wuxuuna mahad ballaaran u jeediyay qaban qaabiyeyaasha shirkan isagoo ku tilmaamay iney yihiin kuwo waajibkii saarnaa kasoo baxay.
“Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay soo dhaweyso cid walba oo doonaysa inay maalgashi ka samaysato gudaha dalka” ayuu yiri Cali Ameeriko oo intaa raaciyay in Soomaaliya ay lugaha la gashay marxalad ka duwan sidii hore.
Waxaa kaloo shirka ka hadlay Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Maxamuud Axmad Xasan oo sheegay in Soomaaliya ay tahay dal muhiin u ah ganacsiga qaarada Africa iyo caalamka, isagoo ugu baaqay maalgashiyayaasha caalamka in ay ka faa’iideystaan fursadan qaaliga ah.
Xubnihii kasoo qeybgalay waxaa ka mid ahaa Wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Soomaaliland Maxamed C/laahi Cumar oo sheegay in Somaliland ay ka jiraan fursado badan oo maalgashiyeyaasha ay ka faa’iideysan karaan.
Safiirka dawlada ingiriiska ee Soomaaliya Ambassador Matt Baugh ayaa isna ka hadlay shirkaasi wuxuuna ka hadlay muhiimada shirkan iyo sida ay dowladdiisa u taageereyso horumarka dalka Soomaaliya.
Madaxa Hay’adda Hanvard Xassan Nuur ayaa ugu mahad celiyay kasoo qeybgalayaasha shirkani wuxuuna tilmaamay in kasoo qaybgalka ballaaran ee shirka ay muujinayso in lagu guulaystay ujeedkii shirka oo ahaa in la isu keeno dhammaan dadka uu khuseeyo maalgashiga iyo dib u dhiska Soomaaliya.
Maalinta beri ah ee Arbacada ayaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo, waxaana laga soo saari doonaa war murtiyeed ku saabsan ujeedada shirka iyo go’aanada kasoo baxa wadatashiga.